3-da Maarso – Maalinta Caalamiga ee Duurjoogta | Radio Himilo
Home / Deegaan / 3-da Maarso – Maalinta Caalamiga ee Duurjoogta
3-da Maarso – Maalinta Caalamiga ee Duurjoogta
Himilo FM – 3-da bisha March sannad kasta waa maalin ama fursad loogu dabaal-dego noolaha kala duwan ee duurka ku nool si kor loogu qaado wacyiga dadka ku howlan daryeelkooda iyo kuwa moogan.
Isla markaasna, maalintani waxay na xusuusinaysaa baahida degdegga ah ee loogu istaagi karo dagaalka ka dhanka ah danbiyada laga galo duurjoogta taas oo dhibaatooyin dhaqan-dhaqaaleed, deegaaneed iyo bulshaba abuuraya.
Hal-ku-dhegga sanadkan 2019 ee Maalinta Caalamiga ah ee Duurjoogta ayaa ah: Nolosha ka hooseysa biyaha ee Dadka iyo dhulka.
Waxay sidoo kale iska xil saari jireen wax-yeelo kaga timaada dadka muwaadiniinta ah ee la nool iyo inay dhibaatooyin dhexooda ah isgaarsiiyaan.
Maanta intaas oo dhami waxay ka baxeen daaqadda. Mana jirto xog iyo macluumaad ku saabsan noloshooda oo laga hayo. Halka wasaaradihii ku howlanaan jiray ilaalinta duurjoogta aysan kaalintooda muuqan. Dowladaha dhismayana uma muuqdaan kuwo mudnaan siinaya ilaalinta deegaanka iyo duur-joogta. Waxa keliya ee marmar la maqlo ayaa ah in la cambaareeyo kuwa sida foosha xun dhibta ugu haya deegaanka.
Siinta jawaab fal-celin u noqon karta ugu yaraan in deegaanku dib usoo kabsado, waxay nagu caawin kartaa inaynan dhaxalkeenna ku lumin howl la’aan iyo qorshe xumi maadaama in ku dhaw 25 sanadood oo ay ku jireen daabul iyo dagaal loo galay dabargoyntooda ay ku le’deen.
Previous: Guardiola oo sheegay in uusan hubin mustaqbalka Ilkay Gundogan
Next: Sabab la xiriirta midabka maqaarkooda ayaa looga reebay diyaarad!